Lowry Hotel waa la iskugu yimid, Balse Pogba kama mid ahan xiddigahii yimid si ay ugu sii nastaan ka hor kulanka Sevilla. » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Lowry Hotel waa la iskugu yimid, Balse Pogba kama mid ahan xiddigahii yimid si ay ugu sii nastaan ka hor kulanka Sevilla.
Xiddiga qadka dhexe xulka faransiiska iyo kooxda kubada cagta ee Manchester United Paul Pogba ayaa seegay tababarka kooxda, waxaana uu xidigan seegi kara kulanka caawa Sevilla iyo kooxdiisa dhexmari doona.
Laacibka 24 Jirkan ayaa laga saaray safkii Man United ee garoonka Old Trafford ka lacayarayso kooxda Sevilla kadib markii uu dhaawac ku soo gaaray tababarka Manchester United saacado uun ka hor inta Man United ku xaroonka Hotelka kooxda Red Devills.
Jamaahiirta Manchester ayaa rajo ka qabay in Pogba soo laaban karo kulanka caawa ee Sevilla, laakiin xidigii hore ee Juventus ayaa maanta laga saaray xarunta tababarka Manchester ee Carrington.
Waxaa kale oo dhawacyo qabo xiddigo badan oo ay kamid yahiin Phil Jones, Marcos Rojo, Ander Herrera iyo Daley Blind ayaa sidoo kale ka maqnaa tababarka Manchester halka uu xaadir ku ahaa Eric Baily oo dhaawac fudud uu soo gaaray kulankii Liverpool.
Cayaartooyda Jose Mourinho ayaa garoonkooda Old Trafford ku qaabili doona caawa talaadada naadiga Sevilla, oo bar baro goolal la’aan ah ay lugtii hore kula soo galeen garoonka Ramon Sánchez Pizjuan Stadium.
Qiimo Layaab leh oo suuqa Ka Taagan Yahay mohamed Salah